About | မာသင်
လူမှုအကျိုးပြု စွန့်ဦးတီထွင် (Social Entrepreneur) တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး၊
ဘဝတိုးတက်မှုအတွက် လေ့လာမှု သည် အဓိက ဖြစ်သည် ဟုယုံကြည်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး
ကိုယ်တိုင်လဲ အများအကျိုးအတွက် မျှဝေသည်။
စီးပွားရေး မဟာဗျူဟာ အပိုင်း ကို ကျွမ်းကျင် သလို
ဘဏ္ဍာရေးအပိုင်း နှင့် စတော့ရှယ်ယာ အပိုင်းများ ဖြင့် ဘွဲ့ ရထားပြန်သည်။
အတွက်အချက် များဖြင့် ဝန်ထမ်းဘ၀ လျောက်လမ်းခဲ့ဘူးသလို
အရောင်းပိုင်းတွင်လဲ ကျင်လည် ခဲ့ရပြန်သည်။
ကျွန်တော် သိသော… ကျွမ်းဝင်သော…လေ့လာထားသော…..ကျင့်သုံးသော…
လူငယ်များ အတွက် ….
အများအကျိုးအတွက် …. ဆက်လျက် မျှဝေနေပါသည်။
ကျွန်တော်သည် အမေရိကန်နိုင်ငံ Brigham Yong (B.Y.U) စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် မှ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှူငွေကြေးဘာသာရပ် (Investment Finance) တက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့ဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ Bloomberg မှ ချီးမြင့်သော Forex, Commodity, Stocks(စတော့ရှယ်ယာဆိုင်ရာ) Certified လက်မှတ်ရရှိခဲ့ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ် ကော်မရှင် (SECM) မှ ပထမဆုံးချီးမြင့်သော Securities Representative လိုင်စင် ရရှိခဲ့သည်။
အမေရိကန် စတော့ဈေးကွက်မှ Trading ပိုင်းအတွေ့အကြုံများ၊ နိုင်ငံတကာငွေကြေးဈေးကွက် Forex အတွေ့အကြုံများ၊ နယူဇီလန်နိုင်ငံ၊ သြစတေးလျနိုင်ငံ၊အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဟာဂိုင်ရီ အစရှိသောနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ Securities ငွေချေးသက်သေခံကုမ္မဏီကြီးတစ်ခုတွင် Investment Adviser ငွေကြေးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေးအဖြစ်ဌင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ၊ လက်ရှိတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မဟာဗျူဟာ ချမှတ်မှု ဆိုင်ရာများ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ စီးပွားဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှု အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် အဖြစ် ဌင်း၊ ငွေကြေးနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အကြံပေးအဖြစ်ဌင်း အစိုးရ နှင့် ပုဂ္ဂလိက ပရောဂျက်များတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး အားလပ်ချိန်များတွင် စီးပွားရေးအသိပညာဆိုင်ရာမျှဝေမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ စာပေရေးသားခြင်း နှင့် စာသင်ကြားပို့ချခြင်းများကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။